ကျမရဲ့နေရာလေး: ယိုးဒယားတောထဲကကိုယ်တို့ ရွှေနိုင်ငံသားများ...
Posted by မီးမီးငယ် at 8:41 AM
Aung Htut July 22, 2013 9:47 AM
န၀တ ပတ္တမြားအကြောင်း အခုမှ သိတော့တယ်... :P
မီးမီးငယ် July 23, 2013 11:18 AM
Anonymous July 22, 2013 4:03 PM
Ma Mee Nage!! How are you?
Very very hot weather and warm body :)
Anonymous July 22, 2013 7:08 PM
နဲနဲစီနဲ့ မြန်မြန်တင်နော်။ အဟဲ။
မီးမီးငယ် July 23, 2013 11:19 AM
Mg Goldfish July 23, 2013 9:18 AM
Thanks for sharing your experience.. Really nice reading
မီးမီးငယ် July 23, 2013 11:20 AM
Very happy for sharing my experience..
ဟန်ကြည် July 23, 2013 10:22 AM
ဖတ်ရတာ အရသာ ရှိလိုက်လေခြင်းဗျာ...နောက်များလည်း မကြာမကြာ လာဖတ်ဦးမှပါပဲ...အရွှန်းလေးဖောက်ပြီး ရေးတဲ့ ပုံစံကို သဘောကျတယ်...
မီးမီးငယ် July 23, 2013 11:25 AM